တရုတ်အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > ဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်ပျော်မှတ်စက်ပစ္စည်း > အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ
Digipol-M90 အလိုအလျောက်အရည်ပျော်အမှတ်တူရိယာသည်တိကျသော၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံများပေးစွမ်းသည်။ high-definition video သည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်း၏အချိန်မှန်ရောင်စဉ်ပြသခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအားအရည်ပျော်မှတ်နှင့်နမူနာအရည်ပျော်အကွာအဝေးကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
Digipol-M90 အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ combines high-precision temperature control technology and high-definition video camera technology, not only to provide users with accurate, stable and reliable test results, but also to provide users with efficient and convenient test experience. The high-definition video can easily and clearly see the whole process of sample melting, and the real-time spectrum display of automatic detection is convenient for users to accurately measure the melting point and melting distance of the sample.
1. အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ Introduction
1: တစ် ဦး တည်းတိုင်းတာခြင်း function ကိုနားလည်ရန်အလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှု;
၂။ တစ်ကြိမ်တွင်နမူနာ ၄ ခုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
4: အရည်ပျော်အပိုင်းအခြားကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ကန ဦး အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအရည်ပျော်ခြင်း၊
6: 21CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့်လျှပ်စစ်လက်မှတ်တို့နှင့်အညီလိုက်နာပါ။
2. အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ Parameter
တစ်အုပ်လျှင် ၄ စောင်
၀.၁â„ ƒ-၂၀â„ ƒ
ဂီယာ ၂၀၀၊ ခြေလှမ်းမဲ့ချိန်ညှိနိုင်သည်
PID တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ မီးဖိုချောင်ကိုယ်ထည်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖုံးအုပ်ထားသောဒီဇိုင်း
± ၀.၂â„ ƒ
± ၀.၄â„ ƒ
(> ၂၅၀â„ ƒ)
အရည်ပျော်မှတ်ပြန်ရနိုင်မှု±0.1â„ âat0.1â„ ƒ/Min ဖြစ်ခဲ့သည်
၁၀.၄ လက်မ FTF အရောင် touch screen အရောင်
YES /Level4လုပ်ပိုင်ခွင့်
ဖိုင်အတည်ပြုခြင်းအဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှု MD5 ကိုတင်ပို့ပါ
Wi-Fi €RJ45ã U disk
OD: Î¦1.3 မီလီမီတာ
ID: Î¦1.1 မီလီမီတာ
3. အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ Features
1.The အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ has HD recording function, easy to observe and look back.
၂။ အခန်းအပူချိန်မှ ၄၂၀ â Large အထိကြီးမားသောအပူချိန်အကွာအဝေး။
၃။ အပူပေးနှုန်းကို ၀.၁ âƒ Min/Min မှ ၂၀â„ ƒ/Min သို့တိုင်မပါဘဲချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. HD အရောင်မျက်နှာပြင်ပြတင်းပေါက်ကိုချဲ့ပါ။
7. Pharmacopoeia စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်အညီ၊ ဥရောပဆေးဝါး၊ အမေရိကန်ဆေးဝါးနှင့်တရုတ်ဆေးဝါးများ
၈။ ၂၁CFR အပိုင်း ၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့်လျှပ်စစ်လက်မှတ်တို့နှင့်ကိုက်ညီခြင်း။
အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ has an important position in the chemical industry and medical research. It is an instrument for the production of food, drugs, spices, dyes and other organic crystal substances.
Shanghai jiahang အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ series perfectly combine high-precision temperature control technology and high-definition video camera technology, not only to provide users with accurate, stable and reliable test results, but also to bring users efficient and convenient test experience. High-definition video can easily and clearly see the whole process of sample melting, automatic detection real-time Tupu display, convenient for users to accurately measure the sample melting point and melt distance.
Jiahang အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
မေး။ ။How many years have your company made အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်အမှတ်တူရိယာ?
A:၁၀၀% ထုတ်လုပ်သူ၊ ပွဲစားများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူမရှိစျေးနှုန်းကွာခြားသည်၊ အရင်းအမြစ်စက်ရုံ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်အားသာချက်ရှိသည်။ Jiahang သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းတွင်အခြေစိုက်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ခွဲ ၁၅ ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ၂ ခုရှိသည်။
hot Tags:: အလိုအလျောက်အရည်ပျော်အမှတ်တူရိယာ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
ဗီဒီယို Melting point meter
Melting Point တူရိယာ
Digital Melting Point တူရိယာ
Melting Point စက်ပစ္စည်း